Mayelana NATHI - INortech Engineering Corporation Limited
Eminyakeni engaphezu kwengu-20 ye-OEM futhi ODM service isipiliyoni.
Shayela Ukusekelwa 021-54717893
Ukusekelwa kwe-imeyili sales@nortech-v.com
Ontantayo Ball Valve
Trunnion egibele Ball Valve
Ukusebenza okuphezulu kwe-Butterfly Valve
Ama-Valve Butterfly ahleli phansi aqinile
Sakaza Iron Hlola Valve
Sakaza Steel Hlola Valve
Kokuzihlanganisa Steel Hlola Valve
Sakaza ama-valve esango lensimbi
Sakaza steel esangweni valve
Amaphayiphu we-ASME Globe
I-DIN-EN Globe valve
Kokuzihlanganisa Steel Globe Valve
Okuphikisiwe Ingcindezi Ibhalansi Lubricated Plug Amaphayiphu
Phakamisa ipulaki valve
I-Valve yeSleeve Sleeve Plug Valve
I-NORTECH Engineering Corporation Limited ingomunye wabakhiqizi nabahlinzeki abahola phambili bezimboni eChina, abanokuhlangenwe nakho okungaphezulu kweminyaka engama-20 kwezinsizakalo ze-OEM ne-ODM.
neqembu lokuthengisa eShanghai, nezindawo zokukhiqiza eTianjin naseWenzhou, eChina, sinikeza izixazululo ezahlukahlukene kumakhasimende ethu emhlabeni jikelele.
Isizinda sokukhiqiza sihlanganisa indawo eyi-16,000㎡ enabasebenzi abangama-200 kuthi abangu-30 kubo bangonjiniyela abaphezulu nezobuchwepheshe.
I-Tianjin Greatwall Flow Valve Co., ltd, umkhiqizi ophezulu we-valve e-China, isikhungo sokukhiqiza sama-butterfly valve, ama-valve wokuhlola kanye nezihlungi, okusebenze njengomkhiqizi we-OEM wezinkampani ezihola umhlaba ezihamba phambili.
Ifakwe amasethi angaphezu kwe-100 okusetshenzwa kwensimbi nokusika, imishini yokuhlola nokuhlola kufaka phakathi imishini ye-CNC, i-advanced physio chemical NDT, ukuhlaziywa kwe-spectral, ukuhlolwa kwempahla yomshini, imitshina yamaphutha e-ultrasonic, ama-gags we-ultrasonic thickness, futhi nokuphakamisa, izixhobo zokuhamba.
Kunikezwe isitifiketi nge-ISO9001, silandela ngokuqinile inqubo ejwayelekile yokulawulwa kwekhwalithi.
I-CE / PED iqinisekiswe inyunyana yaseYurophu.
I-WRAS ne-ACS baqinisekisiwe ngamanzi okuphuza, okuyisibopho emakethe yase-UK naseFrance.
I-Shanghai ES-Flow industrial Co, ltd, enendawo yokugcina impahla, iqembu lokuthengisa nokusekelwa kwezobuchwepheshe, inebanga lebhizinisi lokubeka impahla, ukwenza umsebenzi nokusabalalisa ama-valve, kanye nezixazululo zokulawula ukugeleza kwamakhasimende ethu.
Ngesitoko esiningi sezingxenye ze-valve nama-valve aphelele futhi, singaqinisekisa isikhathi sokulethwa esifushane.
Ikhwalithi ethembekile nokulethwa okusheshayo kusenza sigqame kumakhulu abahlinzeki be-valve eChina.
Imikhiqizo yethu eyinhloko: ama-valve a-Actuated, i-pneumatic butterfly valve, i-valve kagesi kagesi, i-pneumatic ball valve, ama-valve kagesi kagesi, i-valve yesango, i-valve yokuhlola, i-valve yomhlaba, ama-strainers ect.
Ububanzi bebhizinisi lethu
I-Valve stocking, labling kanye nokupakisha
Valve actuation, ukulungisa kanye reconditioning
Ama-valve we-NORTECH athunyelwe eMelika, eYurophu, eMpumalanga Ephakathi naseNingizimu-mpumalanga ye-Asia, anelisa amakhasimende ethu ngekhwalithi ephezulu nensizakalo enhle.
Sikholelwa ukuthi ikhwalithi ephezulu, intengo yokuncintisana kanye nensizakalo ecabangelayo yizinsizakalo eziqinile kuwe.
konke ukusakazwa kunikezwa kusuka kuma-Foundries abekwe phezulu ngesitifiketi se-ISO9001.
ngokunemba ngomshini izingxenye ze-valve ziqinisekisa ubuncane bokusebenza kwe-torque nempilo ende yokusebenza.
sisebenza futhi nomunye umkhiqizi we-valve obekwe phezulu e-china, nazo zonke izitifiketi, kufaka phakathi i-ISO9001, CE, ATEX, Firesafe.
I-Tianjin Greatwall Flow Valve Co., ltd.Izincazelo umkhiqizi we-valve obekwe phezulu e-China, isikhungo sokukhiqiza sama-butterfly valve, ama-valve wokuhlola kanye nezihlungi.
Bheka i-Valve The New Developing Direction
Yini i-valve yebhola
Izinzuzo Zokusebenzisa i-Ductile Iron njengeValve ...
Umehluko phakathi kwe-Resilient Beated Butte ...
Umehluko phakathi kwe-Ball Valve ne-Butterf ...